स्विजरल्याण्डमा बनेको विश्वको सबैभन्दा गहिरो र लामो सुरुङ्ग
२६ जेठ २०७३
५७ किलोमिटर लम्बाई भएको यो सुरुङ १७ बर्ष लगाएर तयार गरिएको हो । पहिलो पटक आवात जावत गर्नको लागि खुल्ला गरिएको यो अहिलेसम्मको सबैभन्दा गहिरो सुरुङ हो । स्विजरल्याण्डको यो सुरुङ संसारकै सबैभन्दा लामो शुरुङ पनि हो । विस्तृत समाचार »
न्यायधीश नियुक्ति प्रकरणमा रिटमाथि रिट, सुनुवाइ सरेको सरेकै, प्रधानन्यायधीश बन्नै मुस्किल
२५ जेठ २०७३
२५ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश अभाव भएपछि कामु प्रधानन्यायधीशलाई सुशीला कार्कीलाई प्रधानन्यायधीश बन्न बाधा परेको छ । कार्कीलाई मात्रै होइन एमालेका सक्रिय नेताहरु सपना प्रधान मल्ल, हरिकृष्ण कार्की लगायतका व्यक्तिलाई पनि न्यायधीश बन्ने समय अनिश्चित बनेको छ । सर्वोच्चमा न्यायधीशको संख्या कम भएका कारण न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाईको विषयमा परेका रिटको सुनुवाई अनिश्चित बनेको हो । मंगलबार सुनुवाई हुने भनिए पनि तीनवटा मात्र इजलास…विस्तृत समाचार »
​स्थानीय र संसदीय निर्वाचनपछि मात्रै सरकार परिवर्तन
२५ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूले गरेको तीव्र विकास देखेर सुस्तसुस्त विकास गर्ने बानी परेकाहरु छक्क परेको बताएका छन् । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय सुर्खेतको केन्द्रीय प्रशासनिक भवनको शिलन्यास गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले विकासका काम गरेको देख्दा अरु छक्क परेको बताएका हुन् । आफ्नो काम देखेर विरोधीहरु अत्तालिएको दावी समेत उनले गरे । सरकार परिवर्तनको चर्चा चलिरहेको प्रसंग उल्लेख गर्दै स्थानीय र संसदीय निर्वाचन गराएर…विस्तृत समाचार »
गुरुङका जेठा छोराले दिए दागबती, सरकारका तर्फबाट उपप्रम रावलले राष्ट्रिय झण्डा ओडाई सम्मान
२५ जेठ , वरिष्ठ संगीतकार अम्बर गुरुङको अहिले अन्तेष्टि हुदैछ । उनका जेठा छोरा किशोरले उनलाई दागबती दिएका छन् । उपप्रधानमन्त्री भिम रावलद्धारा राष्ट्रिय झण्डा ओढाएर उनलाई सम्मान अर्पण गरिएको छ । अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि राष्ट्रिय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा राखिएको उनको पार्थिव शरीरलाई नेपाली सेनाको गाडीमा राखेर पशुपती आर्यघाट पुर्‍याइएको थियो । कमलपोखरी, ज्ञानेश्वर, रातोपुल हुँदै स्वर्गीय गुरुङलाई आर्यघाटमा पुर्याइएको हो । स्वर्गीय गुरुङको राष्ट्रिय सम्मानका…विस्तृत समाचार »
​ ब्राजिलले जितेपछि यसरी नांगिन् यि मोडल (तस्विरसहित)
एजेन्सी/ब्राजीलियन मोडल सूजी कोर्टेजले नाङ्गै तस्बिर खिच्ने भनेर आफूले दिएको बचन पूरा गरेकी छिन् । उनले बार्सिलोना क्लबले स्पेनिश लीग जित्यो भने क्यामराको अगाडि नाङ्गै हुने बताएकी थिइन् ।बर्सिलोना फुटबल क्लबले जित निकाल्नेवित्तिकै सूजीले आफूले गरेको बचन पूरा गरेकी हुन् । सूजीले सोशल ह्यान्डल इंस्टाग्राममा आप्ना न्यूड फोटो पोस्ट गरेकी छिन् । बर्सिलोनाको जितमा सूजी नेकेड भएकी हुन् । फोटोमा उनले बर्सिलोनाको टी–शर्ट र आफ्नो…विस्तृत समाचार »
फासीको सजाए सुनाए पछि जजले किन कलमको टुप्पो भाचिदिन्छ ?
यदि कसैलाई फासीको सजाय सुनाइदैछ भने जजले कलमको टुप्पे तुरुन्त भाचिदिन्छ । तर किन फैसाला सुनाउने वित्तिकै जजले कलमको टुप्पो भाच्छ भनेर तपाईले कहिले सोच्नु भएको छ ? फासीको सजाय भनेको जगन्य अपराधको लागि सबैभन्दा खतरनाक सजाय हो । जजद्धारा पेनको निब यसकारण तोडिन्छकी अर्को पटक यसखालको अपराध नहोस जसमा फासीको सजाय सुनाउनु नपरोस । यदि फसीको सजाय कसैलाई सुनाइन्छ भने अब उसको जीन्दगी समाप्त…विस्तृत समाचार »
यसरी उदाएका थिए सङ्गीतकार अम्बर गुरूङ, जसको साङ्गीतिक योगदान कहिल्यै अस्ताउने छैन
अम्बर गुरुङ नेपाली सांगीतिक फाँटका प्रसिद्ध व्यक्तित्व हुन्। उनले सयौं नेपाली गीतमा सँगीत भरेका छन् । उनी खास गरि नेपालको राष्ट्रिय गान सयौं थूंगा फूलका को संगीतकार को रुपमा परिचित छन् । महासंगीतकार अम्बर गुरुङको जन्म वि.सं. १९९४ मा बाबु उजीरसिंह गुरुङ र आमा श्रीमती रेणुका गुरुङको कोखबाट भारतको दार्जिलिङको लालढिकीमा भएको थियो । उनका बुबामात्र होइन, हजुरबुबा देवराज गुरुङ पनि सेनामा जागीर खान्थे ।…विस्तृत समाचार »
अर्चना पनेरु प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन किन ?
समाचार टिप्पणी पोर्न फिल्म खेल्ने भन्दै नाङ्गो फोटो सार्वजनिक गर्ने अर्चना पनेरु त्यसको केहि समयमै एकाएक नायिका बनेकी छिन् । समाजिक सञ्जालमा धमाधम आफ्नो अर्धनग्न फोटो पोष्ट गरेर चर्चामा आएकी नेपालकी सन्नी लियोनी भन्न रुचाउने अर्चना नेपाली समाजमा एउटा विकृत मानसिकता बनेको छ । बर्षौदेखि फिल्मी क्षेत्रमा स्थापित हुन डटेर लागेका कति अझैसम्म पनि स्थापित हुन नसकेको अवस्थामा पनेरुले देखाउने नग्न शरीरकै कारण आज उनले…विस्तृत समाचार »
​राष्ट्रपति भण्डारी विश्वकै ५२ औं शक्तिशाली महिला
२५ जेठ, काठमाडौं । विश्वका १०० शक्तिशाली महिलनामा नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समेत परेकी छिन् । नेपालकै प्रथम महिला राष्ट्राध्यक्ष बनेकी भण्डारीलाई फोर्ब्सले विश्वकै ५२ औं शक्तिशाली महिला घोषणा गरेको हो । भण्डारीलाई यस्तो घोषणा गर्ने संस्था भने नेपालका करोडपति भनेर विनोद चौधरीलाई घोषणा गर्ने अमेरिकी समाचार संस्था फोर्ब्सले गरेको हो । फोब्र्सले जारी गरेको सन् २०१६ को विश्वका १ सय शक्तिमा नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी…विस्तृत समाचार »
रहेनन् अम्बर गुरुङ, तर बाँचिरहने छन् युगौंयुग
२५ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय गानका संगीतकार अम्बर गुरुङको ७९ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । उपचारकै क्रममा गुरुङको मंगलबार विहान २ बजेर ३७ मिनेटको समयमा निधन भएको ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालले जानकारी गराएको छ । व्याकुल माइलाले रचना गरेको राष्ट्रिय गानमा संगीत भरेका गुरुङको भौतिक शरीर अब नरहे पनि नेपाल र नेपालीबीच उनी युगौंयुग बाँचिरहने छन् न्युन रक्तचापका कारण बेहोस भएपछि गुरुङलाई एक हप्ता पहिले…विस्तृत समाचार »
‹ First Newer 1048 1049 1050 1051 1052 Older Last ›